Dowladda Puntland oo si tiiraanyo leh uga tacsiyeysey geerida Yuusuf Xaaji
Deni oo ka tacsiyeeyay geerida "naxdinta leh" ee ku timid Yuusuf Xaaji
Deni ayaa sheegay in uu si gaar ah murugada ula wadaagayo dadweynaha Puntland iyo bahdii garsoorka ee uu ka dhintay marxuumka.
GAROWE, Puntland - Dowladda Puntland ayaa tacsi tiiraanyo leh waxay u dirtay ehelada iyo asxaabtii uu ka baxay marxuum Yuusuf Xaaji Nuur, gudoomiyihii hore ee Maxkamada Sare Puntland.
Marxuumka oo xanuunsanaa mudooyinkii dambe ayaa waxaa loo geeyay wadankaasi xaalado la xiriira dhanka caafimaad, sidda uu reerkiisa u xaqiijiyey warsidaha Garowe Online.
Sida ay baahisay madaxtooyadda, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in uu si gaar ah murugada ula wadaagayo dadweynaha Puntland iyo bahdii garsoorka ee uu ka dhintay marxuumka.
Dowladda Puntland waxay ka tacsiyaynaysaa geerida Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Puntland Yuusuf Xaaji Nuur oo Ku geeriyoodey dalka Turkiga.
Alle ha u naxariistee Marxuumku waxa uu Soomaaliya kasoo qabtay Xilal kala duwan, waxa uu ahaa masuulkii ugu horeeyey ee loo magacaabo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Puntland.
Sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa bud-dhigayaashii Puntland, isagoona qabtay xilal kale oo muhiim ah, kuwaasi oo uu ugu qareemay horumarka dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaciisa iyo kan Goleyaasha Dowladda Puntland waxa uu uga tacsiyaynayaa shacabka Puntland, bahda Garsoor iyo masuuliyiinta Maxkamadda Sare geerida Alle ha u naxariistee Marxuum Yuusuf Xaaji Nuur, si gaar ah waxa uu tiiraanyada ula wadaagayaa eheladii, asxaabtii qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay Marxuumku.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu Alle uga baryayaa marxuumka inuu dembigiisa dhaafo, su'aasha qabrigana u sakhiro, kuna Abaal mariyo Janatul Fardawsa, samir iyo iimaanna Alle ka siiyo eheladii, asxaabtii, qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay Marxuumku.
"Qaraxyadii Muqdisho iyo Kismaayo waxaa ka muuqaneysa laba gac-layn"
Puntland 27.07.2019. 11:03
Madaxweynaha Puntland ayaa farta ku fiiqay tuhun ay dad badan qabaan oo ku aadan weeraradii u dambeeyay ee Al-Shabaab.
Deni: Si loo dhiirigeliyo, waa in Buugaagta laga gataa qalinleyda
Puntland 23.07.2019. 16:52
Safiiro tegaya Garowe xili Puntland ay soo jiidatay indhaha caalamka
Puntland 29.04.2019. 12:28
Deni oo shaaciyey in dowladiisa ay ahmiyadda siineyso dhalinyaradda
Puntland 14.08.2019. 15:42
Deni oo ka qaybgalay munaasabadda Maalinta Caalamiga Ah ee Yoogada
War Saxaafaded 30.06.2019. 15:05